အီရန် သံရုံး မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်လှစ်မည် | ဧရာဝတီ
အီရန် သံရုံး မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
| January 21, 2013 | Hits:334
6 | | အီရန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံတွင် သံရုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကြိုးစားနေကြောင်း သတင်းရသည်။ အီရန်နိုင်ငံ ၏ အမျိုးသား လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ ကော်မရှင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Seyyed Hossein Naqavi-Hosseini က မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် သံရုံးဖွင့်မည့် ကိစ္စကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်နေကြောင်း သတင်းစာနှင့် တီဗီ အစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်ဟု ဆင်ဟွာ သတင်း တရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရခိုင်ဒေသ အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး လေ့လာဆွေးနွေးရန် မကြာသေးခင်က အီရန်ပါလီမန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သံရုံးဖွင့်လှစ်မည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ကြေညာချက်ထုတ်
ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ကျိုတို သဘောတူညီချက် ၂၀၂၀ အထိ သက်တမ်းတိုး
လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်ဆယ်ဖို့ UNHCR တိုက်တွန်း
အမေရိကန်က မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်း ထပ်တိုး
5 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Ko Latt January 21, 2013 - 4:00 pm	အီရန်သံရုးံသာဖွင့်ခဲ့ရင် မြန်မာပြည်လည်း မကြာခင် ပါကစ္စတန်၊ ထိုင်း၊ အီရတ်လို ကားဗုးံခွဲတာ၊ ဈေးတွေ၊ ဗလီကျောင်းထဲ ၀င်ပြစ်၊ ၀င်သတ်၊ သံဃာတွေ ဆွမ်းခံမရ၊ ဆရာ ဆရာမတွေကို ရက်ရက် စက်စက် သတ်တာ၊ ဖြတ်တာ မြင်ရ ကြားရတော့မယ်။ အဲဒီ အီရန်နိုင်ငံ ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ချီးထုပ် အကြီးစား၊ ရှီယာဘုန်းကြီးတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်မှာ တခါမှ ပြသာနာ မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆွန်နီ၊ ရှီဟိုက် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှု တွေကို နေရာအနှံ မြင်ရလိမ့်မယ်။
Reply	AunG January 22, 2013 - 9:12 am	Yes, Burma Generals and Leaders should not allow in Burma to open Embassy of Islamist Republic of Iran. IN FACT, IRAN are TERRORISTS COUNTRY and ENEMY OF HUMANS. Iran government is runs by Terrorists and their Foriegn Policy are Export TERRORISM of JIHADS to around the World. Burma will become full of TERROISTS , JIHAD WARS and theirs SUICIDES BOMBINGS and KILLINGS…
Reply	ဘမောင် January 22, 2013 - 12:55 am	Ko Latt ပြောတာထက် ပိုဆိုးမယ်။ သံရုံးဖွင့်ပြီးရင် နိုင်ငံမဲ့နေတဲ့ သူတို့ ကိုယ် သူတို့ ရိုဟင်ဂျာ
လို့ အမည်ပြောင်းထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေ ကို လူရွေးပြီး တတိယ နိုင်ငံ အမည်ခံ ကာ သူတို့
အီရန်နိုင်ငံထဲကို ခိုလှုံခွင့်ပေးမယ်။ အဲဒီ လူတွေအားလုံး ကို အစွန်းရောက် သင်တန်းပေးပြီး တကမ္ဘာလုံးမှာ အသေခံ ဗုံးခွဲတဲ့ လူတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်လာလိမ့်မယ်။ ဖြစ်လဲဖြစ်လာကြမယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြန်လာဗုံးခွဲမဲ့ အဓိက အမာခံလူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဒီမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ခွဲထွက်မှုကို တောင်းပြီး ရခိုင် တင်မကမြန်မာ တပြည်လုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်အောင် လုပ်လိမ့်မယ်။
အသေခံဗုံးခွဲတဲ့ လူတွေ အလကားမတ်တင်းနဲ့ ရနိုင်မဲ့ နည်း
တွေထဲမှာ ဒီနည်းက အကောင်းဆုံးဘဲလေ။
Reply	မင်းကြီးညို January 22, 2013 - 5:17 am	ကိုလတ်ပြောတာမှန်တယ် အီရန်နိုင်ငံဟာ အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက်နိုင်ငံပါ။ အကြမ်းဖက်
သမားတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံပါ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အီရန်သံရုံးကို
ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် အသေခံဗုံးခွဲလုပ်ကြံမှုတွေ၊ ဘာသာရေးပဋ္ဋိပက္ခတွေ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှု
တွေ ချိန်ကိုက်ဗုံး နင်းမိုင်း စတဲ့ ထိခိုက်မှု သေဆုံးမှုတွေတော့ မလွဲမသွေ ဖြစ်လာတော့မယ်။
အစ္စရေးနိုင်ငံကိုတောင် ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်မှ ကွယ်ပျောက်သွားအောင် လုပ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြာက်
ထားတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒီလိုအစွန်းရောက် ရက်စက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ သံတမန်ဆက်သွယ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။
Reply	သူရ January 24, 2013 - 4:32 pm	ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှလက်ခံလို့မရဘူး ဘာကြောင့်အီရန်သံရုံးဖွင့်ချင်ရတာလဲဆိုရင် မွတ်ဆလင်
ကုလား(57)ခုနှစ်နိုင်ငံနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့(oic)အဖွဲ့ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံးစိုက်ခွင့်မရလို့ ဒီလိုလုပ်
တာပါ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု့ကော်မတီက
ကြေငြာချက်ထုပ်ပြီးသား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ ငါးစက္ကန့်
တောင် ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောထားတာကို အစိုးရ ဥပေက္ခာ ပြုပြီးတော့နေမယ်
ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ oic ကိစ္စလိုပဲ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု့တွေ ဒီထက်နှစ်ဆတိုးပြီး လုပ်ဘို့
ဂျပန်နှင့် မြန်မာ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး တိုးချဲ့မည်
မြိုင်ကြီးငူ၊ မဲသဝေါ ဒေသမှာ တုိုက်ခုိုက်မှုတွေ ရှိနေဆဲ
တောင်သူများ ကိုယ်တိုင်အာမခံဖြင့် ငွေချေးနုိုင်ရေး ဥပဒေပြင်ရန် အကြံပြု
ပါကစ္စတန်- ရုရှား ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မည်
ကြောင်များသတ်ဖြတ်မှုဖြင့် ထိုင်းအမျိုးသားတဦး ထောင် ၁၈လ ချမှတ်ခံရ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သစ်ကို ကျပ် ၅ ဘီလျံကျော်သုံး၍ တည်ဆောက်မည်
အမေရိကန်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ် ပျံသန်းကာ အင်အားပြ